I-Twizel - Foehn Cottage - I-Airbnb
I-Twizel - Foehn Cottage
I-indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni ephelele ibungazwe ngu-Philippa
U-Philippa Ungumbungazi ovelele
I-Foehn Cottage iyi-boutique esendaweni enokuthula emaphethelweni e-Twizel, idolobha eliseduze leSifunda saseMackenzie ne-Aoraki Mount Cook. Le ndlu encane esanda kwakhiwa inamagumbi okulala angu-2, ilala izivakashi ezingafinyelela kwezi-3.(Umbhede omkhulu ongu-1/inkosi eyodwa eyodwa)
Ikotishi lihlome ngokuphelele nge-microwave, i-ceramic cook top yezinto ezi-2, izinto zasekhishini kanye nesiqandisi. I-carport evaliwe. Iphampu yokushisa/i-air conditioning. I-TV yesikrini esiyisicaba esifakwe odongeni egumbini lokuphumula kanye negumbi lokulala elikhulu. Izingubo zokulala zikagesi. Isomisi sezinwele, isitimela sethawula elishisayo nezinto zangasese ezihlinzekwa endlini yokugezela. Umshini wokuwasha endlini encane. Kuhlinzekiwe ilineni namathawula.
4.93 · 219 okushiwo abanye
Kunemisebenzi eminingi yamahhala noma ebiza kancane. Ukuhamba ngebhayisikili: I-Twizel iyindawo enkulu yokuhlala e-Alps kuya e-Ocean Cycleway, ithrekhi yokungcebeleka yebanga elide esukela eMt Cook iya e-Oamaru. Kukhona amathrekhi omjikelezo amaningi agijima edolobheni nasezindaweni zasendaweni. Ukudoba: Ukudoba emiseleni yamanzi kuyatholakala unyaka wonke futhi kuya kuduma kakhulu. I-Twizel iyisisekelo esaziwayo sabadobi bezindiza bamazwe ngamazwe abeza lapha ukuze bazizwele ukudoba okusezingeni lomhlaba nokugeleza okucacile endaweni ekhangayo. Kunenqwaba yabaqondisi bendawo abathatha amakhasimende, kodwa lokhu kungcono kakhulu ukubhukha kusenesikhathi. Ukugibela ihhashi: I-Glentanner, emgwaqeni oya eMt Cook ihlinzeka ngolwazi lokugibela amahhashi ezintabeni ezizungezile kwabaqalayo kubagibeli abanolwazi. I-Ski-ing: I-Twizel iyimfihlo yabashushuluzi egcinwe kahle. Yize zingakalwanga njengendawo yokungcebeleka, izindawo ezine zokushushuluza zingaphakathi kohambo olufushane. Inkundla ye-Ohau Ski yimizuzu engamashumi amathathu uma uhamba ngemoto futhi izikhathi zokulinda zokuphakamisa zifushane. I-Round Hill e-Tekapo kanye ne-Mt Dobson iyi-1hr 20 min ukusuka e-Twizel. I-Heliski-ing ku-Tasman Glacier ingahlelwa ngesaziso. Amachibi: Ichibi iRuataniwha linokubhukuda okuphephile kwezingane, ukudoba okuhle futhi liyindawo yama-regattas okugwedla kuzwelonke nakwamanye amazwe. ILake Benmore lidume ngemidlalo yasemanzini futhi liyindawo yesibili edume kakhulu ngokudoba kuleli.
Sobabili mina noBlair silapha ukuze sikunikeze ulwazi nosizo phakathi nesikhathi sokuhlala kwakho.
UPhilippa Ungumbungazi ovelele